Mnangagwa ahead after 9 of 10 Zimbabwe provinces counted: official - The Mail & Guardian
Mnangagwa ahead after 9 of 10 Zimbabwe provinces counted: official
Emmerson Mnangagwa of the ruling ZANU-PF party took the lead in Zimbabwe’s presidential election race on Thursday, ahead of his main opponent Nelson Chamisa of the opposition MDC-Alliance , according to official results.
With nine out of ten provinces declared, Mnangagwa had 2 147 505 votes to Chamisa’s 1 929 704, according to tallies from the Zimbabwe Electoral Commission.
The result from the last province of Mashonaland West, a ZANU-PF stronghold, was due to be released shortly.
Zimbabwe has been bracing itself for the release of results in the landmark presidential elections — the first since the ousting of Robert Mugabe — which have already sparked a deadly crackdown on protesters.
Soldiers and police cleared central Harare ahead of the results announcement, shouting at pedestrians and traders to leave, as the opposition Movement for Democratic Change (MDC) continued to charge that ZANU-PF had stolen the election.
The government has accused the MDC-Alliance of inciting Wednesday’s unrest and vowed to enforce a security clampdown.